फेसबुकका केही रोचक तथ्यहरु जुन तपाईलाई थाहा नभएको हुनसक्छ – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
फेसबुकका केही रोचक तथ्यहरु जुन तपाईलाई थाहा नभएको हुनसक्छ
एजेन्सी । विश्वमा पौने दुई अर्बभन्दा धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ता रहेको छन् ती सबैलाई थाहा नहुन सक्छ फेसबुकको लोगो तथा साइट किन निलो रङको बनाइएको होला ? फेसबुकमा कसैले पनि ब्लक गर्न नसक्ने व्यक्ति को हुन् । कुनैपनि व्यक्तिको मृत्युपछि उसको फेसबुक अकाउन्ट के हुन्छ ? यस्ता धेरै जिज्ञासाहरुको जवाफ जान्ने चाहना सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताको हुन्छ । फेसबुकबारेका यस्तै सातवटा रोचक तथ्य यस्ता छन्ः
६.फेसबुकमा अहिले जुन लाइक अप्सन छ, पहिले यसको नाम ब्ध्भ्क्इःभ् राखिएको थियो । तर त्यसलाई पछि बदलेर ष्पिभ बनाइयो ।